China Fampandehanana rafitra fampitana hafanana sy orinasa mpanamboatra | Yongjie
Fampiharana: Radiator, condenser, evaporator, solika-cooler, heater, zavamaniry fisarahana
Endri-javatra vokatra: lanja maivana, fanoherana ny harafoana matanjaka, fampisehoana brazing tsara, fitondra hafanana avo lenta, fanodinana mora, tsy misy fofona, fanoherana ny harafesina matanjaka, sns.
Ampiasaina be izy amin'ny fifanakalozana hafanana ny fiara sy ny milina fanaovana injeniera, ny fivoaran'ny rivotra sivily sy ny ara-barotra, ny fantsom-pamokarana herinaratra, ny fihenan-drivotra, ny tantely tantely ary ny casings bateria firaka vita amin'ny alimo.
Satria ny fikatsahana tsy an-kijanona ny miniaturisation an'ny automotif automotive fifanakalozana hafanana, fahamendrehana avo lenta, fitondra hafanana be, fiainana lava ary vidiny ambany dia lohahevitra mandrakizay;
Ho fanampin'ny fanatsarana ny famolavolana ny firafitry ny hafanana dia tsy afaka ny ho tonga lafatra ny mpamadika hafanana avo lenta raha tsy misy fitaovana manana tanjaka avo sy fanoherana harafesina avo ary azo ahena ho fototra;
Noho ny maha-manokana ny fizotran'ny famonoana alimina alimina, ny fifandraisan'ny fananana isan-karazany dia tsy maintsy voalanjalanja rehefa mamorona fitaovana vaovao sy ny fizotrany vaovao hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fahombiazan'ny fampidirana hafanana;
Ny fampandrosoana sy ny fampiharana ireo fitaovana sy haitao vaovao dia tena handray anjara amin'ny fampandrosoana ireo mpivarotra hafanana aluminium mandeha ho azy.
Tsy afaka mihaona amin'ny fifanakalozana hafanana avo lenta intsony ny alika nentim-paharazana AA3003 na AA3005
- Fanazavana fanampiny;
- tanjaka avo;
- Fanoherana fanoherana avo lenta sy fiainana lava;
-Fanoherana ny mari-pana ambony.
Fampitomboana ny fahombiazan'ny firaka aliminioma:
- Hery lehibe aorian'ny fiterahana;
- Fanoherana ny harafesina tsara kokoa;
- Ny tanjaky ny havizanana amin'ny fantsona (fantsona);
- Formability tsara kokoa;
- Ny fin dia manana fampisehoana fanoherana tsara kokoa;
- Ny vombony manana fitondra hafanana be (vombony);
- Ho an'ny intercooler dia tsy maintsy misy fanoherana ny hafanana avo kokoa;
- Azo amboarina ny firaka.
Previous: Sarimihetsika plastika aluminium
Manaraka: Fitaovana fampiharana angovo vaovao
Coil Aluminium ho an'ny insulated thermal